Wararka - Codsiga 3-dhidibka xasilloonida kamaradda gimbal
Codsiga kamaradda 3-dhidibka xasilloonida ee kormeerka waddada UAV
Dhaqan ahaan, kormeerka waddooyinka ayaa ku saleysan IPC, ITC, Dome iyo qalab kale si loo gaaro kormeerka waqtiga dhabta ah ee gawaarida. Xalalkaan waxaa la isticmaali jiray sanado badan waana qaan gaar. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la horumarinayo wareegga cusub ee dhismaha macluumaadka jidadka, cilladaha ayaa si tartiib tartiib ah loo muujiyey: baaxadda kormeerku wali waxay leedahay aagag indho la ', IPC / ITC ayaa kaliya lagu gaari karaa go'an. Dome / PTZ waxay leedahay dabacsanaan ka wanaagsan, laakiin in si buuxda loo geeyo si loo buuxiyo shuruudaha meelna aan indho la 'u kordhin doonaa kharashyada mashruuca.
Gawaarida anteenada laheyn (UAV) waa xalka wanaagsan ee dheeriga ah ee ilaalada wadooyinka. UAV waxay noqoneysaa caawiyaha wanaagsan ee booliska taraafikada waddooyinka. Shiinaha, ilaalada UAV ayaa loo diray inay fuliyaan roondooyinka maaraynta taraafikada waddooyinka, sawir qaadista xadgudubyada taraafikada, ka takhalusidda goobta shilalka taraafikada.
Kaamirada UAV ee shirkadeena oo leh 3-dhidibka xasilloonida gimbal waxay leedahay faa'iidooyinka soo socda:
1. Ku xirida xayiraadaha nidaamyada jira, taageerida marin u helka ONVIF, masaafo dheer-dheer, fiidiyow-waqtiga-dhabta ah oo loogu gudbiyo hoolka taliska.
2. 30X / 35X zoom optical, qabashada meelaha sare ee gawaarida sharci darrada ah, aqoonsiga cad ee taarikada gawaarida. Cadaadisku wuxuu keenaa luminta qeexitaanka. La xiriir macaamiisha sawirka asalka ah.
3. Caawinta wax ka qabashada ciriiriga waddooyinka iyo shilalka gaadiidka.
4. La socodka haadka gurmadka.
5. Raadinta caqliga.
6. Iftiiminta heerka hoose ee iftiinka iftiinka leh oo leh kamarad zoom la arki karo oo leh kamarad sawir qaade kuleyl leh si loo gaaro kormeer maalin iyo habeen ah.
7. Hawlgal fudud, jawaab deg deg ah.
Waqtiga boostada: Dec-22-2020